Ungayisebenzisa kanjani i-iOS 10 Control Center (II) entsha | Ngivela kwa-mac
El Isikhungo Sokulawula ku-iOS 10 sakhiwe kabusha futhi manje yakhiwa ngamakhadi noma amathebhu amathathu ahlukaniswe kahle enza lula ukufinyelela kwimisebenzi esetshenziswa kakhulu.
Ku ingxenye yokuqala Kulokhu okuthunyelwe sibonile okunye okujwayelekile mayelana ne-iOS 10 Control Center entsha futhi sangena kweyokuqala kwamakhadi aso amathathu, lelo elihlanganisa ukufinyelela okuvame kakhulu obekuvele kukhona ku-iOS 9, yize manje kunezinguquko ezimbalwa. Ngalesi sikhathi sizohlaziya amakhadi wesibili nawesithathu ahambelana noMculo neKhaya ngokulandelana.
1 Lawula Umculo kusuka ku-Control Center
2 Ukulawula Ikhaya
3 Uma ufuna ukwazi kabanzi ngezici ezintsha ze-iOS 10:
Lawula Umculo kusuka ku-Control Center
Kusuka kuphaneli lokuqala le-Control Center, swayipha kwesobunxele ukushintshela kuphaneli Yomculo. Ngokubuyekezwa kwe-iOS 10, i-Apple ihambise izilawuli zokudlala nevolumu nomculo kuziphaneli ezihlukile zayo kusuka kokujwayelekile. Ushintsho ngokungangabazeki luzoba wuhlupho kubasebenzisi abaningi be-iOS abalalela umculo njalo, kepha kuyiqiniso ukuthi ngalesi sinqumo ezinye izilawuli zandisiwe futhi kufakwe isici esisha.
Uma ingoma isidlala kuhlelo lokusebenza loMculo, iphaneli entsha izophila ngengoma edlalwayo, igama lomculi ne-albhamu, nebha yenqubekela phambili yokugxumela kunoma iyiphi ingxenye yengoma. Ungachofoza kunoma yimiphi imigqa yombhalo, ngisho nakwikhava ye-albhamu, ukuze weqe uye kuhlelo lokusebenza loMculo. Ngaphezu kokudlala okuyisisekelo, ikhefu, izinkinobho zokudlulisela phambili nezasemuva, nokulawula ivolumu, I-Apple yethule isici esisha esikuvumela ukuthi ukhethe ukuthi uwudlalela kuphi umculo wakho.
Izithombe ku-WWDC 2014
Le nkinobho entsha itholakala ezansi kwekhadi lomculo ku-Control Center. Ngokuzenzakalelayo, ukudlala kumakwa kudivayisi uqobo, kepha singachofoza kule nketho ukubona uhlu lwamadivayisi lapho singaqondisa khona ukudlala, ngokwesibonelo i-Apple TV, ama-headphone noma izipikha ze-bluetooth, njalonjalo. Isimo ukuthi lawa madivayisi axhunyiwe futhi aphakathi kobubanzi be-iPhone yethu noma i-iPad.
Khetha idivaysi oyithandayo ukudlulisa ukudlala. Ungabuyela ku-iPhone ezenzakalelayo kusuka ku-Control Center, noma ngokumane ucishe idivayisi exhunyiwe.
"Ikhaya elihlakaniphile" alithuthukisiwe kakhulu eSpain kepha, Uma unamadivayisi axhunywe yi-HomeKit, ungawalawula ngephaneli lesithathu le-iOS 10 Control Center. Ukuze wenze lokhu, mane uswayiphele ngakwesokunxele kabili, futhi uzokwazi ukufinyelela kukho.
Uma kwenzeka ususa uhlelo lokusebenza lwasekhaya, khumbula ukuthi le phaneli lesithathu ngeke livele.
Uma usuxhumanise noma isiphi isesekeli se-HomeKit esisebenzisanayo kuhlelo lokusebenza lwasekhaya, nazi izilawuli eziyisisekelo zokulawula ama-smart light bulbs, blinds, thermostat, nokuningi.
Ngaphambi kokuqala esikhungweni sokulawula, qiniseka ukuthi unezinsiza ezifakiwe Ekhaya. Esikrinini esikhulu sohlelo lokusebenza, thepha ku- "Hlela" ekhoneni eliphezulu kwesokudla ukushintsha izesekeli zakho ozithandayo, abayisishiyagalolunye bokuqala yibo abazovela e-Control Center. Ungalandela inqubo efanayo ukuze ubeke phambili izikhala zakho ozithandayo ukuze uzisebenzise ku-Control Center.
Ngaphakathi kwalesi sigaba se-Control Center, izenzo ze-Home zilula: ungathinta isesekeli ngasinye ukusivula noma ukusicisha, ngokuya ngesimo saso samanje. Ukusuka lapho, izenzo zizoncika ngakunye kwalezi zesekeli.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayisebenzisa kanjani i-Control Center entsha ku-iOS 10 (II)
Izinkinga ngokuvumelanisa okusha kwe-iCloud kwe-MacOS Sierra nemali yethu ye-ADSL